मोरंगमा सबैलाई चकित बनाउने स्वर भएका युवा, नारायण गोपालको गित गाउदा भाबुक भए, सबैले हेर्नुहोला (भिडियो सहित) - नेपाली खोज
मोरंग । एक जना प्रख्यात गीतकारले एक पटक यसो भने: “शब्दले हामीलाई सोच्न लगाउँछ। सङ्‌गीतले हाम्रो मनमा भावना जगाउँछ। तर जब शब्द र सङ्‌गीत मिलेर गीत बन्छ, त्यसले हाम्रो मन छुन्छ।”
गीतद्वारा स्वर्गमा बस्नुहुने हाम्रो बुबा यहोवाको प्रशंसा गर्नु अनि उहाँप्रतिको प्रेम प्रकट गर्नु कत्ति राम्रो कुरा! त्यसैले एक्लै हुँदा होस्‌ या मण्डलीमा भाइबहिनीसित मिलेर, गीत गाउनु साँचो उपासनाको महत्त्वपूर्ण भाग हो।
यदि हामी राज्यगीत गाउनुलाई साँच्चै हाम्रो उपासनाको अभिन्‍न भाग ठान्छौं भने गीत गाउने समयमा बाहिर निस्कनेछैनौं वा गीत गाउने भाग छुटाउनेछैनौं। त्यसैले हामी प्रत्येकले आफैलाई यस्तो प्रश्‍न सोध्नुपर्छ: ‘सभामा गीत गाउने कुरालाई म कस्तो ठान्छु?
हर्षोल्लासका साथ गीत गाउन मलाई अप्ठ्यारो लाग्छ भने म के गर्न सक्छु? अनि भावसहित गीत गाउन म के गर्न सक्छु?’ मोरंगमा एक अचम्म लाग्ने स्वर भएका दाजुलाइ हामीले भेटेका छौ । स्वर कस्तो लाग्यो ? तल भिडियोमा हेर्नुहोला।
घलेगाउँ डाँडामा रमाउँदै पर्यटक
त्रिभुवन विमानस्थलस्थित भन्सार कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीका लागि गरगहना परीक्षण तालीम